Blog - Vaovaon'ny sekoly ankehitriny: vaovaon'ny sekoly ankehitriny
Npower Stipend News Androany 2021/2022 Hamarino ny fanavaozana ny vavahady jolay
Filed in Articles by Editorial an'ny TMLT tamin'ny Jolay 16, 2021
Npower Stipend News Androany 2021 - Te hanana ny vaovao farany Mey-2021 Vaovao farany N-power ve ianao? Ary koa, te hahafantatra momba ny vola isam-bolana Npower ianao? Raha eny dia vakio tsara raha mila fanazavana fanampiny. Eto, izahay dia hanome anao ny vaovao farany stipends marina anio. Amin'ny volana […]
Post UTME Forms 2021/2022 Lisitry ny sekoly izay tsy misy endrika intsony
Filed in Exam, Vaovao momba ny sekoly by Staff editorial amin'ny 6 Jona 2021	• 337 Comments
Post UTME Forms 2021 - Jereo ireo sekoly izay manana endrika fisavana fisoratana anarana 2021/2022 Post UTME eto amin'ny Internet eto. Tena tianao ho fantatra ve ny andrim-panjakana nofidinao hamoaka ny taratasy fangatahana fampiharana fanaraha-maso? Vakio tsara ity lahatsoratra ity. Navoaka maimaim-poana teto ny endrika fanaraha-maso ny fidirana amin'ireo andrim-pianarana ambaratonga maro samihafa any Nizeria. Raha […]
Mpihira 10 tsara indrindra sy manankarena indrindra avy any Ghana amin'ny taona 2021
Filed in Entertainment by Staff editorial amin'ny 4 Jona 2021
Mpihira manankarena indrindra avy any Ghana: Te hahafantatra ve ianao hoe iza no mpitendry mozika manankarena indrindra eto Ghana? Avy eo ho anao ity lahatsoratra ity. Hiresaka momba ireo mpitendry mozika 10 tsara indrindra sy manankarena indrindra aho izay nanao ny lazany teo amin'ny sehatry ny mozika. Ireto misy lisitr'ireo mpitendry zavamananaina manankarena indrindra avy any Ghana […]
10 Kintana Chelsea be karama indrindra 2021-22 Latest Update
Filed in Entertainment, Fanatanjahantena by Staff editorial amin'ny 4 Jona 2021
Kintana Chelsea be karama indrindra: mpankafy an'i Chelsea ve ianao? Fantatrao ve fa izy ireo no kintana be karama indrindra ao Chelsea izay mahazo karama betsaka ao anatin'ny herinandro? Ity lahatsoratra ity dia natao hampianarana ny sainao amin'ny lalao baolina kitra miaraka amin'ny fampisehoana aminao ny kintana ambony karama indrindra ao Chelsea. Nahazo valo ny klioba […]
Bitcoin Ny Naira Exchange tahan'ny 2021 Vaovao farany momba ny tsena
Filed in Articles, Taham-panakalozana by TMLTStaff amin'ny 3 Jona 2021	• 2 Comments
Bitcoin tahan'ny fifanakalozana Naira androany: Ity lahatsoratra ity dia hitazona anao hatrany amin'ny daty misy ny Bitcoin (BTC) amin'izao fotoana izao Naira (NGN) Nizeriana sy ny tahan'ny fifanakalozam-bola ankehitriny. Ity lahatsoratra ity dia hitazona anao hatrany amin'ny vidin'ny bitcoin ankehitriny. Azonao atao ny manisy tsoratadidy ity pejy ity raha mila fanavaozana haingana. Ity lahatsoratra ity dia […]
9mobile 4G LTE Data Plans sy ny kaody fampandehanana 2021 Vaovao farany
Filed in Articles, Data bundles by Staff editorial amin'ny 3 Jona 2021
9mobile 4G LTE Data Plans and Codes: Ny orinasa 9mobile dia nantsoina hoe 9mobile ary afaka mankafy ireo drafitra data vaovao azo alaina amin'ny findainao ianao. 9mobile dia manolotra fonosana isan-karazany. Ireo fonosana ireo dia miaraka amin'ny kaody ary voatanisa amin'ity lahatsoratra ity hahafahanao miantso sy misoratra anarana. Prepaid isan'andro […]
Dolara Ny Naira Black Market Exchange Rate 2021 Update
Filed in Articles, Taham-panakalozana by Staff editorial amin'ny 3 Jona 2021	• 1 Comment
Dolara Ny Naira Black Market Exchange Rate: Jereo Dolara Ny Naira Rate amin'ny Parallel Market androany. Ity lahatsoratra ity dia hanome fanavaozana ny dolara isan'andro amin'ny tahan'ny fifanakalozana naira. Azafady mba tsorito ity pejy ity mba havaozy hatrany. Dolara ankehitriny Ny tahan'ny fifanakalozana Naira ankehitriny - Fantatro marimarina fa mety ho […]
Kolejy sy oniversite nahazo fankatoavana tsara indrindra 100 isaky ny fanjakana any Etazonia
Filed in Vaovao momba ny sekoly, Etazonian'i Amerika by Staff editorial amin'ny 3 Jona 2021
Colleges sy oniversite nahazo fankatoavana tsara indrindra: Etazonia Etazonia araka ny fantatsika fa iray amin'ireo firenena matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao. Manerantany, ny fanjakana izay ahitana ny herin'i Etazonia dia firenena 50. Amin'izao fotoana izao, mpianatra marobe no mangataka hahazo fanabeazana amina kilasy manerantany amin'ny […]
Andrim-panjakana avo lenta izay lisitry ny fidirana an-tserasera dia mivoaka amin'ny alàlan'ny fanavaozana an-tserasera 2021/2022
Filed in Vaovao momba ny sekoly by Staff editorial amin'ny 3 Jona 2021	• 6 Comments
Lisitry ny fidirana ho an'ny andrim-panjakana avo kokoa: Eto ianao dia hahazo lisitra fanavaozana ny fidirana aorian'ny Post-UTME 2021/2022 fanavaozana ny anjerimanontolo Nizeriana rehetra, Polytechnics / Monotechnics, Colleges of Education, ary ny hafa maimaim-poana. Manohiza mamaky raha hijery antsipiriany bebe kokoa etsy ambany. Lisitra fidirana dia anaran'ny mpangataka ekena soa aman-tsara, natolotra fidirana vonjimaika ho andrim-panjakana. Matetika ny andrim-panjakana dia avoakan'ny andrim-panjakana […]
Craigslist amin'ny Las Vegas miasa manontolo andro sy antsasak'izao fotoana izao
Filed in Job, Fanavaozana ny fandraisana mpiasa any Etazonia by Staff editorial amin'ny 2 Jona 2021
Craigslist Las Vegas Jobs - Craigslist Las Vegas Ny fikarohana amin'ny lalana dia lalana roa. Midika izany fa afaka mahita asa ianao ary afaka mahita anao izy ireo nefa tsy miady saina be. Ity farany dia tratra amin'ny alàlan'ny fandefasana ny resume anao amin'ny tranokalan'ny Craigslist Las Vegas na mivantana amin'ny tranokalan'ny mpampiasa. Saingy ankoatry ny fihetsika […]
Vaovao momba ny vatsim-pianarana any Nizeria 2021/2022 Fanavaozana ny lisitra Janoary
Filed in Vaovao, Fanavaozana ny vatsim-pianarana by Editorial an'ny TMLT amin'ny 26 Mey 2021
Vaovao momba ny vatsim-pianarana any Nizeria 2021: maniry hahita vaovao momba ny vatsim-pianarana na fotoana mety any Nizeria ankehitriny? Mazava ho azy, misy fotoana maro ho an'ny Nizeriana isan'andro amin'ny alàlan'ny teti-pianarana sy fanomezana. Ny fikarohana dia nanaporofo fa misy 50 mahery ny vatsim-pianarana vaovao isan'andro ho an'ny Undergraduate, Masters's ary Ph.D. mpianatra any Nizeria hianatra any an-trano na […]
Vaovao Npower Vaovao Androany 2021 Hamarino ny fanavaozana ny Mey izao
Filed in Job, Vaovao by Staff editorial amin'ny 13 Mey 2021	• 0 Comments
Npower News Androany 2021: Ny vaovao momba ny N-power dia saika manerana an'izao amin'ny Internet ary nanapa-kevitra izahay fa hanome anao ny vaovao fironana tsara indrindra ihany androany. Azafady, araraoty ny fotoanao ary vakio tsara ity toro-lalana ity. Vao nohavaozinay ity torolàlana ity minitra vitsy lasa izay. N-power recrutement dia programa matotra be any Nizeria. Betsaka ny tsy an'asa […]
Kupon'naman'ny mpihira 10 tsara indrindra ary kaody promo 2021 Vaovao farany
Filed in Articles, Trends by Staff editorial amin'ny 10 Mey 2021
Kitapo sakaizan'ny mpiangaly mozika: efa nandre zavatra mahasarika toy ny sakaizan'ny mpiangaly mozika ve ianao teo aloha? Fantatro fa zavatra tsy fahita firy io, fa ity dia zavatra tena mahaliana. Ity lahatsoratra ity dia hanome anao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny tapakila naman'ny Mpihira. Ity lahatsoratra ity dia hampianatra anao ny momba ilay sakaizan'ny Mpihira […]
Latest Big Brother Naija News 2021 Jereo ny Vaovao farany
Filed in Rahalahy Naija, Vaovao by Editorial an'ny TMLT amin'ny April 21, 2021
Rahalahy Naija: ny fahitalavitra Big Brother Naija zava-misy dia manohy mampiseho fahombiazana lehibe sy laza mitombo isaky ny vanim-potoana. Ny fanomanana ny vanim-potoana fahenina dia mandeha aorian'ny faran'ny fe-potoana 5 Lockdown miaraka amin'i Laycon izay mandresy. Raha mila fanazavana momba ny seho fizarana faha-6 dia vakio tsara ity lahatsoratra ity. Big […]
Firafitry ny karaman'ny polisy nizeriana 2021 Hizaha ny refin'ny karama NPF febroary
Filed in Firafitry ny karama by Staff editorial amin'ny 5 Febroary 2021	• 0 Comments
Firafitry ny karaman'ny polisy Nizeriana 2021 Hizaha ny refin'ny karama NPF febroary. Scale momba ny karaman'ny polisy nizeriana 2021: Ity lahatsoratra ity dia hanazava anao bebe kokoa amin'ny ohatrinona ny karaman'ny polisy nizeriana hatramin'ny alàlan'ny laharana avo indrindra ka hatrany amin'ny toerana banga ambany indrindra. Mianara bebe kokoa etsy ambany… Ny polisy Nizeriana (ny polisy polisy nizeriana ara-dalàna) lasa tena milay […]
Filed in Message, Quote by Editorial an'ny TMLT tamin'ny Jolay 23, 2021
Tratry ny tsingerintaona nahaterahan'ireo rahavavy Quotes: Ny rahavavy dia mety ho toy ny sakaiza akaiky indrindra, ny namanao akaiky indrindra ary manao toy ny ray. Noho izany, raha manana rahavavy na rahavavinao ianao ary fitsingerenan'ny andro nahaterahany, dia mila manantena azy hanana fehezanteny mahafinaritra sy hafatra mahafinaritra sy mahafinaritra ianao, mba hahataitra azy. Manana rahavavy […]
Filed in Job by Editorial an'ny TMLT tamin'ny Jolay 23, 2021
www.immigration.gov.ng/recruitment form 2021: Ny sampan-draharaha misahana ny fifindra-monina ao Nizeria dia nanomboka tsara ny fandraisana mpiasa ho an'ireo mpangataka fivoriana 2021. Ity pejy ity dia hitarika anao amin'ny fomba fangatahana ireo toerana mitohy izay dokambarotra NIS ary koa fampandrenesana momba ny fisokafana asa hafa any Nizeria ho an'ireo nahazo diplaoma sy tsy nahazo diplaoma. Sampan-draharahan'ny sampan-draharaha misahana ny fifindra-monina any Nizeria […]
Filed in Vaovao momba ny sekoly by Editorial an'ny TMLT tamin'ny Jolay 23, 2021
Ity fampahalalana manaraka ity dia ho torolàlana ahafahanao mampiasa ny fizahana valin'ny University Open University 2021 amin'ny fanarahana ny rohy valin'ny www.nouonline.net. Hataonay antoka fa ny fampahalalana nomena eto dia notsorina sy mazava tsara mba hahafahanao manamarina ny valinao raha tsy misy endrika […]
Filed in Message by Editorial an'ny TMLT tamin'ny Jolay 23, 2021
Filed in Job by Staff editorial tamin'ny Jolay 23, 2021	• 0 Comments
Standard Chartered Bank Recruitment 2021: Ity pejy ity dia noforonina tamim-pomba ofisialy ho an'ireo mpangataka liana maniry hahafantatra hoe rahoviana ny Standard Chartered Bank no handray ireo nahazo diplaoma ho an'ny 2021. Na izany aza, noho ny fanahianao dia manavao anao izahay miaraka amin'ny fandraisana mpiasa farany nahazo diplaoma 2021 Standard Chartered Bank antsipirihany amin'ity pejy ity. Standard Chartered PLC dia […]
Filed in Job by TMLTStaff tamin'ny Jolay 23, 2021	• 0 Comments
Standard Chartered Bank Nigeria Recruitment Portal 2021: Amin'ity lahatsoratra ity dia hianaranao ny famaritana ny orinasa, ny fahaiza-manaon'ny fampiharana, ny fepetra takiana ary ny mari-pahaizana. Ireo mpangataka liana dia tokony hanaraka ny drafitra etsy ambany hahazoana fampiharana mahomby. Banky Standard Chartered - Manintona olona manan-talenta izahay. Tsy vitan'ny hoe afaka manome anao ny tombotsoan'ny zavatra niainany izy ireo, fa mampiharihary koa [...]
Filed in Job by TMLTStaff tamin'ny Jolay 23, 2021	• 2 Comments
Fampidirana fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana momba ny sakafo eran-tany 2021: Ity pejy ity dia hitarika anao amin'ny fampahalalana farany momba ny fomba fangatahana ho an'ny fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana momba ny sakafo eran-tany any Nizeria ho an'ireo nahazo diplaoma sy mpianatra nahazo diplaoma. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianaranao ny famaritana ny orinasa, ny fahaiza-manaon'ny fampiharana, ny fepetra takiana ary ny mari-pahaizana. Ireo mpangataka liana dia tokony hanaraka ny lisitry ny tari-dalana […]
Filed in Job by TMLTStaff tamin'ny Jolay 23, 2021
Portal Job United Nations World Food Programme 2021: Ity pejy ity dia hitarika anao amin'ny fampahalalana farany momba ny fomba fangatahana ho an'ny fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana momba ny sakafo eran-tany any Nizeria ho an'ireo nahazo diplaoma sy mpianatra nahazo diplaoma. Ny Firenena Mikambana momba ny sakafo eran-tany dia maso ivoho lehibe indrindra manerantany miady amin'ny hanoanana manerantany. Ny iraky ny WFP dia […]
Filed in vatsim-pianarana by TMLTStaff tamin'ny Jolay 23, 2021	• 0 Comments
Liana amin'ny fikatsahana ny fandaharam-pianarana diplaoma any Canada ve ianao? Raha eny, ity misy fotoana mety ho anao. Ny oniversite kanadiana amin'ny alàlan'ny vatsim-pianarana Vanier Canada nahazo diplaoma dia manasa ny fangatahana avy amin'ireo mpianatra te-hanao fandaharam-pianarana amin'ny andrimpanjakana. Ity programa vatsim-pianarana ity dia nalaina tao amin'ny oniversite kanadiana niaraka tamin'ny fizarana Vanier CGS. Tsy an-kanavaka, […]